Ubuhle: Ukuphucula ifuthe kwiiNtengiso zakho zeMidiya yoLuntu | Martech Zone
Ixesha elingaphezulu, abathengisi baphuhlise iindlela ezizodwa kunye neendlela ezintsha zokwenza izikhokelo. Kodwa iintengiso ezikwi-Intanethi zigcina indawo ephambili kwindawo yentengiso. Isifundo sika-Appssavvy, "Isalathiso semisebenzi yoLuntu-Ukulinganisa ukusebenza ngokukuko kweNtengiso yezeNtlalontle" eqhutywe ngo-Epreli ka-2011, sityhila ukuba intengiso edityanisiweyo kwimisebenzi yentlalo ethe yasasazeka kwimidlalo yezentlalo, usetyenziso, nakwiiwebhusayithi zinamaxesha alishumi elinanye asebenza ngokukhangela okuhlawulelweyo, kwaye kabini njengempumelelo njengamajelo osasazo.
Iintengiso ze-Intanethi zemveli, kwimidiya yoluntu okanye kwenye indawo, ziibhokisi okanye iintengiso zebhanti. Ngelixa kuqala ukusebenza, ezo ntengiso ngoku zivelisa ii-CPMs ezisezantsi kwaye zinciphile ekusebenzeni kweminyaka. I-2010 Harris Interactive poll ityhila ukuba iipesenti ezingama-43 zabasebenzisi be-intanethi bayazityeshela iintengiso zebhanile. Oku kungenxa yokuba abasebenzisi benethiwekhi yokuncokola banexesha elincinci (kunye nexesha lokujonga!) Ukunikezela kwiintengiso, abazithatha njengeziphazamisayo.
Isoftware izama ukuqinisekisa ukuba intengiso yemidiya yoluntu ihambisa i-ROI esempilweni ngendlela entsha kwiintengiso ezikwi-Intanethi.
Ubungangamsha ngu-Appssavvy liqonga lobuchwephesha lokuthengisa elisekwe kwimisebenzi elivumela abathengisi ukuba bavule amathuba amatsha entengiso kunokuthenga nje indawo kuluhlu esele lukhona.
Iqonga lobuGcisa liqinisekisa ukuba abasebenzisi bahlala bezamkela iintengiso zalo. Ilandela indlela yokuziphatha komsebenzisi kwaye ihambise intengiso xa umsebenzisi ethatha ikhefu embindini womsebenzi. Ikwaqinisekisa ukuba intengiso iyadibana kumava onke. Ngamanye amagama, ibonisa iintengiso ezifanelekileyo, iqinisekisa ukuba iintengiso zinxulumene nomsebenzi owuthandayo womsebenzisi, kwaye izama ukungamphazamisi umsebenzisi.
Umthengisi ufumana ukuqonda kwintsebenzo yeentengiso ngokusebenzisa iimetriki zephulo, kubahlalutyi kunye nophando obonelelwe ngobuChwepheshe.
Ngolwazi oluthe kratya, amaxabiso, okanye ukuqala ngokupapasha iintengiso usebenzisa ubuChwepheshe, nceda undwendwele: http://appssavvy.com/#contact.
tags: UmtsalaneUsetyenzisoamaphuloiimetworkindlela yokuziphatha komsebenzisi
Cebisa iphepha lakho likaFacebook noMntla weNtlalo
Jul 14, 2012 ngo-3: 03 AM
Ewe. Izinto ziqhubeka zitshintsha nge-SM kwaye kuhle ukuba ukwazi ukuza neengcebiso eziluncedo zokuxhasa utshintsho kunye nokunyusa ukusebenza kwe-SMA.